Swiiti anwụrụ Ọkwa 419 Ndị aghụghọ na Atụmatụ - Egwuregwu swiiti anwụrụ - Free Ndụ Ndụ Atụmatụ Ndị na-egosi
Ị nọ ebe a: Ulo / Dulite Crush aghụghọ / Swiiti anwụrụ Ọkwa 419 Ndị aghụghọ na Atụmatụ
Last updated on Ọgọst 4, 2021 Site na Isobella Franks Leave a Comment
Ever nwetụla mgbe ị na-eche ka oke osimiri dị omimi? Ego anyị buru ibu bụ nnukwu ụyọkọ kpakpando anyị? Olee otú mbara igwe dị? Kedu ọkwa nke swiiti anwụrụ Saga ga-adị? Echere m, Ọ dịghị ka anyị agafeela ha niile; n'ezie, Ọtụtụ n'ime anyị na-ada ezigbo azụ n'isi nke ugbu a. Na mgbakwunye akụkụ, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-atụ anya. Maka ndị ka na-arapara na ọkwa gara aga, anyị na-eweta Candy Crush Level 419 Ndị aghụghọ na Atụmatụ.
Mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-egwu egwuregwu, anyị na-ezute ọkwa nke na-ewe anyị ụbọchị ole na ole. Mana nke ahụ bụ ọ joyụ nke ịlụ ọgụ iji nweta ihe ma ọ rụchaa ọrụ ike; na-eme anyị obi ike ma dị ụtọ. Ihe dị otu a mere na Candy Crush Saga ebe ọkwa ụfọdụ na-eme ka ndị egwuregwu wepu ntutu ha na iwe. Ọ dị mma, ọ bụchaghị, mana ọ na - eme ndị mmadụ nnukwu iwe na iwe. Chee ụdị ọ joyụ ha nwere mgbe ha na-agafe ọkwa ndị ahụ.
Ebumnuche nke swiiti anwụrụ 419 bụ ogologo oge. Have ga-anakọta 100 odo swies, 6 kechiela swiiti, na 2 bọmbụ agba agba. Tinyere nke a, Player nwekwara akara 18.000 isi. Nke a bụ gbute azụ, Ndị swiiti na-ekpuchi ihe ka ukwuu n'etiti etiti ahụ. Naanị mgbe emechara iji kpochapụ ha, ị nwere mpaghara dabara adaba ị ga-egwu na ya.
Swiiti anwụrụ Ọkwa 419 Ndị aghụghọ na Atụmatụ:
Site n'ihe anyị nụrụ, ọtụtụ ndị egwuregwu ejirila ọtụtụ ụbọchị na njedebe iji gụchaa ọkwa a mana ha emeghị nke ahụ. Onwere ihe nlere ka anyi n’egbochiri ndi n’ile anyi n’abia ozo, na nke ahụ bụ ha anaghị ahazi egwuregwu ha. Ma ọ bụrụ na ị na-egwu dị ka ndụmọdụ enyere, anyị ji n'aka na ị ga-ekpochapụ ọkwa ahụ na nyocha nke mbụ.
Ebumnuche gị mbụ kwesịrị ịbụ ikpochapụ ihe mgbochi (nkwanye swiiti) ime ka ihe di nfe ma diri gi nma. Na ohere zuru oke, can nwere ike ịmepụta cha cha cha cha pụrụiche dịka ịchọrọ ma kpochapụ larịị ahụ. Nwere ike mezuo ebumnuche gị ma emesịa ịmechaa ndị na-ekpuchi ihe na etiti.
Just as with most levels, it is best to keep your focus on making special candy, ya mere esosola ntuoro anya kpuchie anya gị ma meghee anya gị maka nchikota ọ bụla.
Anyị ghọtara na ọ gaghị ekwe omume maka mmadụ niile, mana ọ bụ otu n’ime ọkwa ndị ahụ ebe ị na-ewepụta nnukwu egbe. Yabụ ọ bụrụ na inwere ego ọ bụla ị nwere ike ị nweta (kandụl pụrụ iche) ị nwere ike iji, dị njikere ijide onwe gị.
Nke ahụ bụ ya, see you guys next time. Until then, nọrọ ụtọ.